I-Rinzai Ngaba Igama leJapan leSikolo seZen Buddhism
Isikolo seKoans neKensho
URinzai igama lesiJapan lesikolo seZen Buddhism . Kwavela eChina njengesikolo seLinji. I-Rinzai Zen ibonakala ngokugxininiswa kwimeko yama-kentsho ukuqonda ukukhanya kunye nokusetyenziswa kokucatshulwa kwe-koan kwi- zazen .
E-China, isikolo seLinji sisikolo esiphezulu seZen (esibizwa ngokuba nguKan eChina). ULinji wathintela kakhulu uphuhliso lweZen (Seon) eKorea. URinzai Zen ungomnye wezikolo ezibini zaseZen eJapan; enye nguSoto.
Imbali yeRinzai (Linji)
URinzai Zen uvela eChina, apho kuthiwa yiLinji. Isikolo seLinji sasungulwa nguLinji Yixuan (i-Lin-chi I-hsuan, u-866), owayefundisa ethempelini kwiPhondo laseHebei enyakatho-mpuma yeChina.
UMninimzi uLiji ukhunjulwa ngenxa yesimo sakhe sokunyaniseka, esichukumisayo. Wayenomdla "wokutshitshiswa" iZen, apho ukusetyenziswa kwekhono lokumemeza kunye neengqungquthela kwakuya kumbangela umfundi ukuba abe nolwazi lokukhanyisa. Ininzi yale nto esiyayaziyo ngoMfundisi LInji ivela kwiincwadi zakhe eziqokelelweyo ezibizwa ngokuthi yiLinji Lu , okanye irekhodi yeLinji, eyaziwa ngesiJapan njengeRinzairoku .
Funda ngakumbi: Linji Yixuan
Isikolo seLinji sahlala singacacile kwaze kwaba yilapho iNgoma yeNtetho (960-1279). Kwakuye ngeli thuba isikolo seLinji saqalisa ukuqhelaniswa kwendlela yokwahlukana.
Funda ngakumbi: Isingeniso kwiKoans
Iikholeji zekhoan zakudala zahlanganiswa kweli xesha. Amaqoqo amathathu awaziwayo kakhulu:
I- Biyan Lu (ngesiJapan, iHekiganroku , ngokuqhelekileyo iguqulelwe ngokuthi "i-Blue Cliff Record"), iqulunqwe kwifom yayo yokugqibela ngu Yuanwu Keqin (1063-1135)
I- Congrong Lu (ngesiJapan, i- Shoyoroku , ngokuqhelekileyo iguqulelwe ngokuthi "Incwadi Yokulingana" okanye "Incwadi Yobungakanani"), eyahlanganiswa nguHizhi Zhengjue (1091-1157). Qaphela ukuba iNkosi Hongzhi ngokwenene yayisesikolweni saseCaodong, kungekhona iLinji.
I- Wumenguan (ngesiJapan, i- Mumonka n, eguqulelwe ngokuqhelekileyo ngokuthi "Isango elingenakuQala"), elihlanganiswe nguWumen Hui-k'ai (1183-1260)
UbuBuddha, kubandakanywa nesikolo saseLinji, beye kwixesha lokunciphisa emva kweNkoma yoBukumkani. Nangona kunjalo, iLinji Chan Buddhism isasetyenziswa ngokubanzi eChina.
Ngekhulu le-11 iLinji yahlula kwizikolo ezibini, ezibizwa ngesiJapan i-Rinzai-yogi kunye neRinzai-oryo. UMyoan Eisai waletha iRinzai-oryo eJapan ngasekupheleni kwekhulu le-12. Esi sikolo sokuqala seZen eJapan. I-Rinzai-oryo idibene ne-Rinzai kunye nemikhwa e-esoteric kunye nezinto zeTendai Buddhism.
Esinye isikolo, iRinzai-yogi, yasungulwa eJapan nguNanpo Jomyo (1235-1308), owathi wathunyelwa eChina waza wabuyela ngo-1267.
Kungekude ngaphambi kokuba uRinzai Zen akhangele ukuxhaswa kwabantu abahloniphekileyo, ngokukodwa amaSamamura. Uninzi lweziphumo ziza kuba neentsika ezicebileyo, kwaye abaninzi abafundisi beRinzai babenwabile ukubanceda.
Funda ngakumbi: Samurai Zen
Akunabo bonke abalawuli be-Rinzai abafuna ukuxhaswa kwama-Samurai. Umgama we-O-to-kan - obizwa ngokuba ngabafundisi abathathu abasungula, uNampo Jomyo (okanye u-Daio Kokushi, 1235-1308), uShuho Myocho (okanye uDavid Kokushi, 1282-1338), kunye noKanzan Egen (okanye iKanzen Kokushi, 1277- 1360) - kugcinwe umgama ukusuka kwiidolophini kwaye ayizange ifune i-Samurai okanye ihlonipho.
Ngenkulungwane ye-17, uRinzai Zen wayesele ehleli. U-Hakuin Ekaku (1686-1769), we-O-to-kan, wayengumguquleli omkhulu owavuselela uRinzai waza wabuyisela kwakhona kwi- zazen .
Wenza inkqubo yokwenza i-koan, ekhuthaza ukuqhubela phambili kwee-Koans ukufumana umphumo ophezulu. Inkqubo yeHakuin ilandelwa kwiRinzai Zen namhlanje. I-Hakuin nayo ingummeli wesandla "esidumileyo" sodumo.
Funda ngakumbi: Ubomi, Izifundo kunye nobugcisa beZen Master Hakuin
Rinzai Zen Namhlanje
I-Rinzai Zen eJapan namhlanje kakhulu iHakuin Zen, kwaye bonke ootitshala abahlala kwiRinzai Zen bangama-Hakuin o-to-kan.
Ngokungafani no-Soto Zen, ongaphantsi ngaphantsi kwegunya le-Soto Shu, i-Rinzai yaseJapan isithethe seetempile eziphathelaniswe ngokungavumelekanga zifundisa i-Hakuin kaRinzai Zen.
U-Rinzai Zen waqale waziswa kwi-West ngokubhala kwe- DT Suzuki , kwaye uRinzai Zen ufundiswa kwaye ufundiswa eMelika, e-Australia naseYurophu.
Kwaziwa nangokuthi: Rinzai-shu, Lin-chi-tsung (isiTshayina)